I-china pp ishidi elingenalutho, ama-pp lukathayela wamashidi Umkhiqizi kanye nomthengisi | Sihai
Ishidi elingenalutho le-Pp (i-Polypropylene Hollow Corrugated Plastic Sheet) yiphepha elingenalutho elakhiwe ngodonga olunezindonga ezimbili ezixhunywe izimbambo eziqondile. Kk ishidi elingenalutho futhi lazi njengephepha likashidi lukathayela, ibhodi lukathayela, kk ibhodi elingenalutho, kk ishidi le-flute, kk ibhodi yomtshingo, i-pp correx sheet kanye ne-pp coroplast sheet.
Ishidi elingenalutho le-Pp (i-Polypropylene Hollow Corrugated Plastic Sheet) yiphepha elingenalutho elakhiwe ngodonga olunezindonga ezimbili ezixhunywe izimbambo eziqondile. Kk ishidi elingenalutho futhi lazi njengephepha likashidi lukathayela, ibhodi lukathayela, kk ibhodi elingenalutho, kk ishidi le-flute, kk ibhodi yomtshingo, i-pp correx sheet kanye ne-pp coroplast sheet. ishidi elingenalutho lenziwa ikakhulukazi ngomthelela omkhulu we-co-polymer polypropylene (PP), engabuye isebenze kabusha, igezekeke, iqine futhi isetshenziswe kabusha njll. I-Polypropylene PP Hollow Fluted Corrugated Plastic Sheet / Ibhodi ifakazele ukuthi ifanele ekusetshenzisweni kokupakisha , ezokukhangisa, ezokwakha, ezolimo, ezezimboni kanye nezeMithi njll.
Singakwazi ukwenziwa ngokwezifiso ukushuba kusuka ku-2mm -12mm, ngokujwayelekile, ubukhulu obungu-2-5mm busetshenziselwa imikhiqizo yokupakisha, futhi ubukhulu obungu-4-6mm busetshenziselwa ukukhangisa, ngokusho kohlelo lokusebenza oluhlukile, i-GSM ingenziwa ngezifiso, iphakeme I-GSM ibhodi eliqinile. Ishidi elingenalutho le-Pp liyinto entsha engasetshenziswa kuzo zonke izinhlobo zezimboni, kuyinto eguquguqukayo engenziwa enziwe nganoma yisiphi isimo, noma yisiphi isayizi. Ishidi le-pp elingenalutho ngokusho kohlelo lokusebenza oluhlukile, lingenziwa ibhodi le-flame elisebenzisayo, i-ESD ishidi likathayela, ne-UV livikela iphepha elingenalutho, lingaphinde lenze ukwelashwa kwe-corona kokunyathelisa kusetshenziswa.
2-12mm kp ishidi elingenalutho, pp lukathayela ishidi imininingwane
Ubukhulu 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 9-10mm 11mm 12mm
I-GSM (g / m2) Ama-350 ± 30 500 ± 30 700 ± 30 800 ± 30 1000 ± 30 1250 ± 30 1450 ± 30 1600 ± 30 1850 ± 30 2000 ± 30
Umbala nosayizi Umbala owenziwe ngokwezifiso, usayizi owenziwe ngokwezifiso (ububanzi obukhulu be-2300mm, ubude noma yisiphi isayizi)
Izinketho 1.I-Flame Retardant
PP eziyize ishidi izinzuzo:
1) Isisindo Esilula, ngokuqinile
2) Okungenacala, okungekho ukunambitheka, Ukungcola-mahhala
3) Ukungena kwamanzi, ukumelana nomswakama
4) Shock ukumelana, Ukuguga ukumelana, Corrosion nemithi, Heat ukwahlukanisa
5) Ukuvuselela kabusha \_ imvelo-inobungani
6) Umbala ogcwele, usayizi owenziwe ngezifiso, osebenzisa kalula
Ishidi elingenalutho le-PP linesisindo esilula, ukuqina, ukulingana okufanayo, indawo ebushelelezi, ukumelana nokushisa okuhle, amandla aphezulu emishini, ukuzinza kwamakhemikhali okuhle kakhulu nokufakwa kukagesi, izici ezingezona ezinobuthi. Kungaba ngokuya ngohlelo lokusebenza olwehlukile engeza izinto ze-ESD ezenziwe nge-ESD pp ishidi elingenalutho, engeza izinto ze-UV ezenziwe nge-UV zivikele iphepha likathayela nokunye. Ngakho-ke kuyinto eguquguqukayo engasetshenziswa kuzo zonke izinhlobo zezimboni.
Izicelo zeshidi lukathayela ze-PP:
1.Izimboni zokupakisha umkhiqizo womkhiqizo: ibhokisi lokuphuma kwempahla, ibhokisi lokugcina impahla, ibhokisi lokugcina impahla, isitsha sokugcina impahla, ibhokisi lokuthumela, ibhokisi lokupakisha, ibhokisi le-ESD, ibhokisi lokupakisha le-ESD, ibhokisi lezinto zokupakisha elekthronikhi, ibhokisi lezingxenye zepulasitiki, ibhokisi lokuhlukanisa ibhokisi, i-ESD ibhodi elingenalutho inzuzo yebhokisi, ibhokisi lokuthengiswa kwebhodi elingenalutho elingenalutho.
2.Ibhodi elisekela ikesi nesikhwama: ikesi nebhodi lokufaka ulayini, ikesi nebhodi lokuxhasa isikhwama, ibhodi lokuhlukanisa.
3.Ibhodlela, imboni kasilika ijikeleza: ingilazi yebhodlela lendwangu, ingilazi yamabhodlela kabhiya, ikani lemikhiqizo ungqimba, usilika osebenzisa ungqimba wephedi, ukuhlukaniswa kwamabhodlela, ungqimba lwephalethi, amaphakethe okupakisha
4.Imboni yemishini: Iphedi yesendlalelo somshini womshini, izingxenye zepulasitiki zomshini, izingxenye zomshini.
5.Imboni yokukhangisa: Ibhokisi lokuboniswa kwebhodi elingenalutho, ibhokisi lokukhangisa, ibhodi lokukhangisa, ibhodi le-corona, uphawu lwe-coroplast, ibhodi lezimpawu, ibhokisi lokubonisa, izimpawu zikathayela
6. Umhlobiso wasekhaya: ibhodi yophahla, ishidi le-grille, ukwahlukanisa kwendlu yangasese, ibhokisi lezitoko, isitsha sokugcina impahla
7. ifenisha umkhakha: itafula letiyi itiye ibhodi, ifenisha umhlobiso ibhodi.
8. Ezolimo: zonke izinhlobo zamabhokisi ezithelo, amabhokisi emifino, amabhokisi ezibulala-zinambuzane, amabhokisi okudla, amabhokisi eziphuzo; Uphahla lokushisa.
9.Izinto zokubhala nemikhiqizo yezemidlalo: ibhodi elihlakaniphile, isikhwama sefayela, ibhokisi lamafayela.
10.Imboni yezimoto: iphedi yesondo lokushayela, ipuleti lomsila wemoto, iphedi yesendlalelo, isihlukanisi sezingxenye zemoto, ibhokisi lokuzenzakalela, izingxenye zokugcina ibhokisi
11. imboni kagesi: isiqandisi ibhodi, umshini wokuwasha emuva, isiqandisi ukwahlukanisa.
12. Imikhiqizo yezingane: izingxenye ze-buggy, i-backboard ye-buggy, i-buggy cushion, isithiyo esihlakaniphile sezingane.
Ishidi elingenalutho le-PP lisetshenziswa kabanzi, insimu yesicelo ekungeneni okungaguquki, kuphela ingxenye yayo ethuthukile, kunezindawo eziningi okufanele zithuthukiswe.
PP plastic ibhodi eziyize isicelo:
1. Ibhodi Lokukhangisa;
2. Amabhokisi okurisayikilisha, afaka phakathi amabhokisi okusetshenziswa kabusha, amabhokisi enzuzo, amabhokisi emifino nezithelo, amabhokisi okugcina izingubo, namabhokisi ezinto zokubhalela zezimboni ezahlukahlukene;
3. Amabhodi ezimboni, afaka phakathi ukuvikelwa kwentambo yangaphakathi nekhebula, ingilazi, ipuleti lensimbi, izinto ezahlukahlukene ukuvikelwa kokupakisha kwangaphandle, amapayipi, ama-racks, ukwahlukanisa, amapuleti aphansi, amakhadi egumbi, njll .;
4. Ibhodi yezokuvikela, isikhathi sokusebenzisa amakhadibhodi neplywood ezintathu ukuvikela izinto zokwakha ekwakhiweni asisekho. Ngokuqhubeka kwezikhathi nokwenza ngcono ukunambitheka, qiniseka ukuthi ukwakheka kokuhlobisa kuqediwe ngaphambi kokuphothulwa kokwakhiwa nokuvikelwa okufanele kufanele kunikezwe ukugcina ukusebenza Komnotho, ukuphepha nokwenza lula, nokuvikelwa kokwakhiwa kwamakheshi namaphansi ngaphambi kokwamukelwa .
Langaphambilini pp lukathayela partiton
Olandelayo: pp ibhokisi lukathayela lukathayela